Alefa Barea: nanokatra botika hivarotana fanamiana | NewsMada
Alefa Barea: nanokatra botika hivarotana fanamiana
Tsy mitsahatra ny mikaroka ny fomba rehetra hanohanana ny Barea de Madagascar ny fikambanana Alefa Barea. Taorian’ny nananganan’izy ireo ny vondron’ny mpanohana “club des supporters”, manolotra ny toeram-pivarotana ireo fanamiana ho an’ny mpijery sy namana te hiara-paly amin’ny ekipam-pirenena malagasy indray ny Alefa Barea.
Botika Alefa Barea, hita eny Antsahabe, efa nisokatra nanomboka ny 9 aogositra lasa teo. Tanjon’ny fikambanana ny hampitoviana ny fanamiana hoentin’ireo mpijery ho avy etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, hanohana ny Barea, amin’ny lalao hikatrohan’i Madagasikara amin’i Sénégal, ny alahady 9 septambra ho avy izao. Misy karazany roa ilay akanjo, ny fotsy ranoiray, jifaina amin’ny vidiny 25.000 Ar ary ny mena, 30.000 Ar amin’izao fanokafana izao. Hita ao amin’ny (facebook) Alefa Barea, ny pitsopitsony.
Tsy ireo ihany fa ho tonga amin’ny faran’ny herinandro ho avy izao koa ny “écharpe” menamena, amidy 8.000 Ar ny iray. Marihina fa efa misy ihany koa ny hiaka sy ny hira iarahana amin’i Samoela, fampirisihana sy fanohanana ny Barea de Madagascar, mandritra io fifandonana amin’ny Lionan’i Téranga avy any Sénégal, io.